Yakanyanya Vertical Super Yakakura Yekuchengetera Tangi Mugadziri uye Fekitori | BTCE
BTCE super hombe matangi akagadzirirwa LIN, LOX, LAR, LNG, LCO2, akatwasuka kana akatwasuka ane vacuum perlite insulation kana super insulation. Iyo seriyo yakakura hombe yekuchengetera matangi anowanikwa ane hunyanzvi kubva pa150 m3 kusvika 500m3 ine yakanyanya kubvumidzwa kumanikidza kushanda kubva pa2 kusvika 35 bar uye yakagadzirwa zvinoenderana neChinese kodhi, AD2000-Merkblatt, EN kodhi 97/23/EC PED (Pressure Equipment Directive) ASME kodhi, Australia/New Zealand AS1210 nezvimwe.
■ Proprietary insulation and support structure design kuderedza kupisa kwekupisa kuderedza zuva nezuva evaporation;
■ Hombe yakamira tangi tsigiro uchishandisa iyo yakachengeteka siketi fomu uye funga zvekufambisa nekusimudza misa yakakosha bhegi;
■ Chikepe chekunze chakagadzirwa nekabhoni simbi uye simbi isina tsvina inoshandiswa kuchengetedza nzvimbo iyo pende iri nyore kukuvadzwa panguva yekusimudza, kutakura uye kushanda kuti ive nechokwadi chehupenyu hwebasa uye kunaka kwepende.
■ Mapuleti ose epombi anogadzirwa nesimbi isina simbi kudzivirira kupisa kwakadzikama kutsemuka uye kukuvadzwa kwependi kunokonzerwa nechando chegoko repombi panguva yekushandiswa.
■ Yakakwenenzverwa pearlite jecha rekuzadza uye yekuvharisa zvinhu mamhepo maitiro kuti ive nechokwadi chiri nani chekudzivirira mhedzisiro yekuvharisa layer.
■ Ivhavha inoshanda sisitimu yakabatana uye iri nyore kushandisa nekuchengetedza.
∎ Mavharuvhu ese akabatana neavha anotora zvikamu zvinounzwa kunze kwenyika kuti ave nechokwadi chehupenyu hwevacuum uye kuvimbika.
■ Nzvimbo yekunze yetangi rekuchengetedza yakaputirwa nejecha nehupamhi hweHEMPEL chena epoxy pendi kuti ipe hupenyu hurefu uye chitarisiko chakanaka, kuderedza kupisa kwemwaranzi uye kuderedza kubuda kwezuva nezuva.
Model Gross Volume (m3) Net Vhoriyamu(m3) Hurefu kana kureba(m) Diameter(m) NER LO2(kugona/zuva) MAWP(MPa)
Yakakosha dhizaini inowanikwa kune ese mamodheru pachikumbiro chakakosha. Dhizaini uye yakatarwa inogona kuchinja pasina chiziviso chekutanga
Mukugadzira matangi akakura kwazvo, tine ruzivo rwakakura kwazvo. Kambani yedu yakavambwa muna 2008, uye Muna 2009, takatanga kugadzira zvikamu zvitatu zve200 m3 matangi ekuchengetera chipatara. Iyo yepakati iokisijeni yemuchipatara. Kusvika ikozvino, mamiriro ekushanda ematangi matatu aya achiri akanaka kwazvo, uye isu hatina kugamuchira chero mhinduro yehutano. Mumakore akatevera, takaenderera mberi nekugadzira 200m3 uye 250 m3 matangi ane midhiya yakasiyana kubva kumvura okisijeni, liquid nitrogen, liquid argon, liquid carbon dioxide kuLNG.
Nekuwedzera kwemusika weLNG muChina, kudiwa kwemusika kwematangi makuru ekuchengetedza LNG kuri kuwedzera, saka isu tine ruzivo rwakakura rwehunyanzvi mukugadzira chigadzirwa ichi. Muna 2018, takagadzirawo 300 m3, 8bar tank yemutengi weMalaysian. Tangi racho rakareba mamita 29, dhayamita 4.3 uye rinorema matani makumi mapfumbamwe nemaviri. Iri tangi richashandiswa kupa oxygen kuzvipatara zveMalaysia. Naizvozvo, iyi tangi yekuchengetera idambudziko rakakura kune kugadzirwa kwekambani, kutakura uye mhando yechigadzirwa.
Mwedzi mina gare gare, nekuedza kwevashandi vose, tangi yakazosvika muMalaysia zvakanaka sezvakarongwa. Kugadzirwa uye kuendesa tangi iyi kwakawedzera chivimbo chedu mukugadzira emhando yepamusoro matangi akakura uye tinotenda kuti tichawana maodha ezvigadzirwa zvakakura mune ramangwana.
LNG peak shaving station inogara
200 m3 liquid nitrogen matangi mumhepo yekuparadzanisa chirimwa
300m3 liquid okisijeni matangi ekutakura uye mushure mekuiswa panzvimbo
Zvakapfuura: LNG ( Liquid Natural Gas ) Mafuta eMatangi eChikepe
Zvinotevera: Trailer Tangi yeCryogenic Liquid Gasi